I-Turtleneck - imbonakalo yendalo yonke ye-wardrobe yintombazana yanamhlanje. Le nto yinto ephathekayo kwaye ikhululekile, enhle ukugqoka ngexesha lokubanda. Ugxininisa isidima sowesifazane kwaye uhambelana nayo yonke into. Makhe sibone okokuba sinxibe i-turtleneck ukuze sibonakale isitayela kuyo nayiphi na imeko.
I-Turtleneck inokucetywa kwiintlobo ezahlukeneyo zembumba: uboya, i-guipure, i-cashmere, i-knitwear okanye i-angora. Eyona nto ikhangeleka yiyo i-turtlenecks esuka kwi-cashmere ne-angora. Zingaba nemibala eyahlukileyo, ukusuka ekubomvu obomvu ukuya kwi-gray grey ne-black. Into efanelekileyo yokubhinqa ifanelekile kuyo nayiphi na imeko: kwintlanganiso yezoshishino, kwindibano nangomhla.
Namhlanje i-turtleneck yinto ekhethekileyo yeofisi yefestile. Ukuba i-code yokugqoka ivumela, unokudibanisa i-turtleneck ne-suit ekhanyayo yoshishino: obomvu, i-raspberry, eluhlaza. Ngomxholo ogqithiseleyo, i-suit suit isiphelele kwii-turtlenecks zembala engaqhelekanga: obomvu, i-emerald eluhlaza, i-burgundy, i-blue or purple.
I-Turtleneck: sikhetha phantsi
Njengomzimba wengubo yansuku zonke, i-turtleneck ihambelana ngokudibanisa nexabiso elikhulu lezinto. Ukuze afaneleke ngokugqithiseleyo kunye ne-frank jeans, ibhulukhwe nayiphi na isinqununu kunye nombala. Ingubo ingaba yiklasi, okanye igcinwe nakweyiphi enye isitayela. Emva kokubeka i-skirt ende-ipencilisi, uya kubonakala ube yintombazana enhle. I-ensemble ephumelelayo iya kuvela xa idibaniswe ne-skirt vkletku. Ukuba uya kudibana nabahlobo okanye ngosuku, unxiba iifutshane nge-turtleneck. Kuzo, zikhuphe izikhumba eziphakamileyo - kule ngxibo uya kuba nako ukubonisa imilenze yakho, neizryukaya ibonakale ingcolile.
Indlela yokwahlukana kweengubo zemihla ngemihla?
Ukuze ugweme imifanekiso yansuku zonke, ungayigqoba isitya esineqhokhwe, ijeyiti enekhenkce okanye ibhokisi elikhanyayo. I-cardigan eyongezelelweyo izakukhupha umfanekiso uze unike umbala obalaseleyo. Iimodeli zinokubeka i-turtleneck phezu kwesikhumba esiluqilima, esityinwe ngombumba kunye nokuzalisa ingubo ngeebhotshi eziphezulu eziphantsi okanye ibhalti.
Inketho efanelekileyo kuyo nayiphi na imeko iya kuba yintlangano yesheyi kunye neebhulukhwe ezimnyama ezimnyama kunye nezicathulo eziqhakaziweyo, okanye iibhotshi zesikhumba. Yenza ukukhangela okuqhakazileyo, uchithe iinwele - kunye nokudibanisa ukuhamba okanye ubone ukulungele. Yaye ukuba ubeka amehlo akho ngeentolo ezimnyama kwaye usebenzise umlomo obomvu emlonyeni wakho, ngoko nayiphi na imeko uya kukhangeleka kwaye ungabonakali. Ukuqokelela iinwele kwi-pony umsila, ungenza umfanekiso wesithinjana se shishini.
Ukulungiswa phantsi kwe-turtleneck kukhethwe ukwenzela ukudala ukusika. Ukuba loo nto ingumbala owodwa, ngoko unokuthabatha imihlobiso ebanzi. Ikholeji egocekileyo yegolide, okanye iqela eliqaqambileyo elincinci, liyakubonakala lihle. I-necklace ebomvu okanye intambo ye-pearl ifaneleke kwi-turtleneck emnyama. Amacici kufuneka abe mkhulu, ngokukhawuleza atyelele ingqalelo. Amantombazana amaninzi ayesaba kwaye akafuni ukusebenzisa ii-scarves kunye ne-turtleneck. Ngokugqithisileyo ngebala: umbala wesikhala uza kuba nakho ukuvuselela ngokucacileyo umfanekiso uze unike ubuhle. Musa ukulibala malunga nokufikelela okunjalo njengengxube. Kulo mzobo omnyama otyunjisiweyo uya kukhangeleka kakhulu. Ukuba ubeka umda omde, i-strap entle ingaba uncedo oluhle.
Ngokuqhelekileyo, i-turtleneck yinto ephela yonke into, inika i-flight imaginance of unlimited of imagination kwongezwa umfanekiso wesibhakabhaka. Khumbula ukuba ubufazi kunye nobuphuzi busoloko buhlala bunxulumene, nangona kukho imfashini eguqukayo.
Unokukhetha njani indlela efanelekileyo yoNyaka omtsha we-2014?
Ziziphi iiglavu zasebusika zokukhetha?
Intombazana idla ngokutshintsha imifanekiso
Izindlela zokususa ulwaphulo-mthetho
Uhlobo lwe-Hysterical kubasetyhini
Imifanekiso emnandi namakhadi ngoSeptemba 1
Indiza kunye nosana. Indlela yokulungiselela
Indlela yokuba yindoda enhle kakhulu
Luhlobo luni logqirha kufuneka ndihambe nomntwana?
Indlela yokulahleka isisindo ebusweni?
Ungayilungisa njani i-sauces ngokufanelekileyo kwiintlanzi nenyama?